Dowladda Soomaaliya: Ma aqoonsanin doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo - Jigjiga Online
HomeSomalidaDowladda Soomaaliya: Ma aqoonsanin doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo
Dowladda Soomaaliya: Ma aqoonsanin doorashooyinkii ka dhacay Kismaayo
Wasaaradda arrrimhaa gudaha, federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa warsaxafadeed qoraal ah oo ay kaga hadleyso doorashooyinkii Kismayo, warqaddas oo ay summaddeedu tahay WAGF&D/XW/062/19 oo ku taariikheysan 22/08/2019.
Wasaaradda waxaa ay sheegtay in iyadoo tixraaceyso warqadda ay summaddeedu tahay WAGF&D/XW/062/19 ee soo baxday 06/07/2019-ka iyo habraaca wasaaradda arrimaha gudha, Federaalka iyo dib u heshiisiinta ee soo baxday 25 May 2019- iyo 24 July 2019, warsaxafadeedka trisigiisu yahay WAGF&D/XW/073/2019 iyo war saxafadeedka trisigiisu yahay WAGF&D/XW/073/2019 soona baxay 17 August 2019, oo dhammaantood ku saabsanaa doorashada baarlamaanka, shir-guddoonka iyo doorashada Madaxweynaha Jubbaland waxay sheegtay in ay ka walaacsan tahay kana xun tahay dhacdooyinka ka soo cusboonaaday Magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Jubbaland ee ku saabsan caleema saarka baalmarsan habraacyada doorashooyinka, dastuurka iyo shuruucda dalka.
Wasaaradda waxaa kale oo ay caddaysay in aanay aqoonsanay natiijooyinka kala duwan ee kasoo baxay Magaalada Kismaayo, kuwaasoo ay wasaaraddu ku sheegtay iney tilmaamayaan in shaqsiyaad kala duwan uu mid weliba gaarkiisa u sheegto inuu yahay Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Wasaaraddu arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa waxaa kale oo ay war saxafadeedka ku sheegtay in ay aqoonsan karta oo kaliya doorashooyin wadar-oogol ah, lagu qanacsan yahay oo ay ka qayb qaateen dhammaan musharrixiinta Baarlamaanka, Shir guddoonka iyo Madaxtooyada oo ku saleysan xor, xalaal, hufnaan, laguna wada kalsoonan karo, kuna dhacda jawi nabdoon ayna goob joog ka yihiin dowladda Federaalka iyo Beesha Caalamka.
Warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa imanaya xilli maanta Magaalada Kismayo ay ka dhacday laba doorasho oo lagu kala doortay laba madaxweyne oo iska soo horjeeda.
Axmed Maxamed Islaam ayuu baarlamaanka Jubbaland maanta u doorteen inuu noqdo madaxweynaha Jubbaland iyada oo la sheegay inuu Axmed MAdoobe ay guusha ku raacday wareegga koobaad uuna helay 56 cod. Axmed Madoobe ayaa isla markiiba loo dhaariyay xilka madaxweynaha cusub ee Jubbaland.
Dhanka kale qaar ka mid ah musharrixiinta mucaradka Jubbaland waxay iyaguna shaaca ka qaadeen inay madaxweynaha Jubbaland u doorteen Cabdiraashid Xidig, oo isla maanta ba ay u dhaariyeen xilkaas.
Wiil uu dhalay Maxamed Siyaad Barre oo geeriyooday
Qabqable Dagaal oo loo magacaabay duqa magaalada Muqdisho